रबीन्द्र मिश्रको प्रस्ताबका बिपक्षमा उभिनेहरुका नाममा ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
केहीले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ – तपाईं आफूलाई स्वतन्त्र भन्नुहुन्छ, राजनीति गर्दिन भन्नुहुन्छ तर राजनीतिक कुरामा किन यति धेरै चासो ? म फेरी क्लियर गरौँ – विगत २६ वर्ष यता म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा छैन र हुने पनि छैन । म स्वतन्त्र छु, तितो तर सत्य बोल्छु, लेख्छु किनकि म एउटा सचेत नागरिक हुँ, पत्रकारिता गर्ने मान्छे हुँ । राजनीति गर्नु र बुझ्नु फरक कुरा हुन । म राजनीति गर्दिन तर अलिकति बुझ्छु जस्तो लाग्छ । राम्रो लाई राम्रो र नराम्रो लाई नराम्रो भन्नु मेरो धर्म हो । म आफ्नै पौरख र पसिनामा विश्वास गर्ने र चल्ने मान्छे हुँ । कुरो यही हो बुझे भैगो !
“हल्लै हल्लाको देश, लुटतन्त्र लाई लोकतन्त्र भनिने देश, गलगाँड तन्त्र लाई गणतन्त्र भनिने देश, जति धेरै अपराध गर्न सक्यो त्यति ठुलो नेता बनिने देश, राक्षसी तन्त्र चल्ने देश, चोरलाई चौतारो र साधुलाई शूली हुने देश, शतीले श्राप गरेको हाम्रो देशमा रवीन्द्र मिश्रले अलि ढिलो बोले तर सत्य बोल्ने हिम्मत गरे । देश सबै भन्दा माथि हुनै पर्छ । कुर्सीको लागि होइन बिचारका लागि बहस मात्र होइन विभाजन नै भयो भने पनि ठिक छ, अब रवीन्द्र उनकै प्रस्तावित मार्ग चित्रमा डटेर अगाडि बढुन् । मिलनहरू बिछोड हुन सक्लान् तर रवीन्द्रले अब खुट्टा कमाउनै हुन्न । म उनको समर्थक भएर वा उनको पार्टीको शुभचिन्तक भएर होइन, राजनीतिबाट पूर्ण अलग, एउटा स्वतन्त्र र साधारण मान्छे भएरै भन्दै छु – हल्लै हल्लाका भरमा रवीन्द्रको चरित्र हत्या गर्न र उनलाई डाम्न खोज्नेहरूलाई कौवाले कान लाग्यो भन्दा कौवाका पछाडि नदौडिन र आफ्नो कान छाम्न आग्रह गर्दछु । अपराध र भ्रष्टाचारका सिँढी चढ्दै आएका नालायकहरूलाई आफ्नो आदर्श र नेता मान्नेहरूले, आरती उतार्नेहरूले रवीन्द्रको खोइरो नखनेकै ठिक होला कि । हो भोलि उनी गलत बाटो गए भने त्यो बेला जे गर्नु पर्छ गरौँला तर हाल सम्म उनी यी सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षका नालायकहरू भन्दा दश गुणा बेटर छन् । सत्य तितो हुन्छ ।”
यो पनि पढ्नुहोस कुस्ती खेल्ने लिखुरे राष्ट्रपतिको कुर्सीमा
१४,श्रावण.२०७८,बिहीबार २१:२३ मा प्रकाशित
← के राजनीति गर्छौ रवीन्द्र तिमी ??
अब एमालेले महिला युथ फोर्स गठन गर्ने, माधव नेपाल एमालेमै सक्रिय हुने संकेत ? →